GORFEYNTA FAAFAHA DARAN EE KORONA-FAYRAS “COVID-19”: Qaybtii 2aad | 18 May News
GORFEYNTA FAAFAHA DARAN EE KORONA-FAYRAS “COVID-19”: Qaybtii 2aad
March 17, 2020 - Written by admin
Halista Ku Duugan Xanuunka Korona-Fayras
▪︎Saaxiibbayaal, waxay dunidu ku hawlan tahay ogaal-doon feejigan iyo in fahan qoto-dheer laga helo waxyeelada uu COVID-19 u geysan karo aadmiga. Iyada oo ilaa hadda culumadda Saynisku ay isku raacsan yihiin in xanuunka Korona-fayras halis weyn u geysan karo dadka waayeelka ah iyo dadka la nool xaaladdaha caafimaad darro sida:
1. Dhiig-karka “High blood pressure”,
2. Wadne Xanuun “Heart disease”,
3. Sanbab Xanuun “Lung disease”,
4. Kansarka “Cancer”,
5. Macaan ama Sonkor “Diabetes”,
Sidee Ayay Xayawaanku Ugu Gudbin Karaan Dadka Xanuunka Korona-Fayras?:
▪︎Caadiyan, xanuunkan waxa lagu yaqaannaa xayawaanka oo uu badanaaba asiibo, isaga oo u gudba aadmiga, halka dadkuna isku sii gudbin karo. Tusaale ahaan qoys-hoosaadka ilma qabayto nololeyda “SARS-CoV”, waxa laga helaa Bisadaha, halka qoys-hoosaadka “MERS-CoV” laga helo Geela. Hayeyeeshee, weli si buuxda looma caddeyn ama daah-qaadin in xayawaanku yihiin ilaha burqashada Korona-fayras.
▪︎Si kastaba ha ahaatee, waa muhiim in taxadar badan laga yeesho xayawaanka iyo xoolaha aynnu dhaqanno, gaar ahaan xilliyada la joogo Sayladdaha Iibka Xoolaha, Maalista iyo Daryeelka.
▪︎Sidoo kale, waa in xilli kasta xoog badan la galiyaa ilaalinta nadaafadda cuntada, siiba:
1. Hilibka, Caanaha iwm waa in laga ilaaliyaa wasakhaw ku yimaadda maeka la karinayo iyo gacmagacmeyn aan munaasib ahayn.
2. Ka fogaanta isticmaalka Hilibla Caydhiin.
Xidhiidhka Degsiimada Iyo Heerka khataraha Ilama Qabato Nololeyda Korona-Fayras:
▪︎Dhab ahaantii, khatarta iyo waxyeelada xanuunka Korona-Fayras, wuxu ku xidhan yahay degsiimada bukaanku ku sugan yahay ama ku nool yahay. Dad badan oo ku dhaqan degsiimooyin oo dunida ayaa lagu arkay in ay hooseyso xaddiga asiibka xanuunka COVID-19. Dhinaca kale, cudurka COVID-19 wuxu wakhtigan aad ugu fiday dunida oo dhan. Iyada oo ay aad u sarreyso asiibidda iyo halista COVID-19 ee dadka ku dhaqan ama booqashada ku joogga Magaalooyinka iyo aaggaga uu ka dillaacay ilma qabato nololeyda Korona-fayras.
▪︎Haddaba, Dawladdaha dunida ayaa qaadaya tallaabooyin is daba joog ah markasta oo la soo sheego bukaanno cusub oo Korona-Fayras ah. Waxa la galay taxadir badan oo dhinacyo badan khuseynaya, tusaale ahaan:
1. Socdaalka dibedda iyo dhaqdhaqaaqa guddaha.
2. Waxbarashada iyo kulamada waaweyn,
▪︎Xaqiiqdii, xakameynta iyo taxadarka noocan ayaa ayaa hoos u dhigaya heerka fiditaanka iyo halista asiibka ilma qabato Nololeyda Korona-Fayras. Maxaa yeelay, Magaalooyinkii iyo Aaggagii dalka China ee uu ka dillaacay ka is taagay fidistii xanuunka COVID-19. Inkasta oo ay nasiib darro weyn tahay filashada inuu COVID-19 mar kale ka dillaaci karo dalka China.
Cabsida Taagan Iyo Halista Korona-Fayras:
▪︎Dadka dunida oo dhan ayaa xilligan aad uga welwelsan inuu ku dhaco xanuunka Korona-Fayras. Haddaba, waa muhiim akhriste in aad ogaato waxyeelada COVID-19 ee Jaadasha dadka. Run ahaantii carruurta iyo dadka da’yarta ah wuxuu u asiibaa si safmareen ah, kumana keeno waxyeello weyn. Inkasta oo uu xanuunka COVIS-19 halis yahay, haddana shantii qof ee uj ku dhaco Korona-Fayras waxa Cisbitaal la dhigaa hal qof oo ka mid ah. Hsdday sidaa tahay maaha in dadka dunidu aad uga walwalo dillaacista iyo waxyeeleynta ilma qabato nololeyda COVID-19.
▪︎Dhinaca kale, waxa jira fursado aynnu ku qaadi karro tallaabooyin badan oo ka dhan ah Faafaha Daran ee Korona-fayras, taasi oo nafteena, qoysaska iyo dadka aynnu jecel nahayba hoos uga dhigeysa halista iyo fidistiisa. Haddaba, akhriste waxa joogteyn iyo dedaal kaaga baahan fulinta:
1. Faraxalka “Hand-washing”,
2. Yeelista, fulinta iyo la socodka tallooyinka ka imanaya bahda caafimaadka. Tusaale ahaan goobaha ka caaggan socdaalka, booqashada, shaqdhaqaaqa iyo kulamada.
Jamal A. Mus